Amaxesha okuhambisa: ngoJuni 9-16 kwi-iMac | Ndisuka mac
Inyani yile yokuba besisazi ukuba iMac entsha kwaye izakulibaziseka malunga nokuhanjiswa kwenqanawa kodwa khange siyicinge kangako. Kule meko, iApple entsha yezixhobo ezizezinye kwimodeli yazo esisiseko inemihla yokuhanjiswa kwale nyanga inye kaMeyi, ngokukodwa kwiveki ephelileyo phakathi kukaJuni 25 no-1, kodwa xa sisungula imodeli elandelayo ukusuka kwiibhola ezisibhozo thina sele ndidlule enye iveki, ukusuka nge-9 ukuya kwi-16 kaJuni ukuhanjiswa.
Kuyabonakala ukuba imfuno kunye nokugcinwa kwezi zixhobo zitsha kunokuba ziphezulu kodwa asikholelwa ukuba yanele ukonyusa amaxesha okuhanjiswa kwezi zixhobo zintsha ngokubaluleka. U-Apple wayeyazi le nto xa babesungula iMac entsha ukusukela ukunqongophala kwe-chip, ubhubhane wehlabathi, kunye nezinye izinto zangaphandle ngaphandle kwamathandabuzo.
Kungenzeka ukuba la maxesha okuhambisa aya kuncipha njengoko ibango lincipha. kodwa asikholwa ukuba iyakuba njalo ixesha elithile kuba kuqhelekile ukubona ulibaziseko ekuhanjisweni kwezinto njengoko iintsuku zihamba.
Ngokuqinisekileyo iApple ngabokuqala abanomdla ekwenzeni ukuhanjiswa kwakamsinya kubangcono, ke banyanzela oomatshini ukuya kwelona liphezulu ukunciphisa la maxesha okuhambisa. Ngamanye amaxesha amaxesha okuhambisa aya kuba made kunokuba eneneni kwaye oku kuthetha ukuba kwizihlandlo ezininzi iimveliso zifika ngaphambi komhla wokugqibela olindelekileyo. Kwimeko apho ufuna iqela elizimeleyo ngakumbi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo la maxesha okuhambisa Bandisa nemihla efikelela kancinci ukusukela nge-15 kuye kwi-22 kaJuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Amaxesha okuhambisa: ngoJuni 9-16 kwi-iMac
UMiguel Pascual sitsho
Ndi-odole imac entsha ye-24 ″ M1 ngo-Epreli 30, ndiyaqikelela ukuba ndingowokuqala. Ndiyicelile nge-2 TB kunye ne-16 GB yememori, kwaye ewe, ixesha ababendinike lona yayili-5 ukuya kwiiveki ezi-6, Oko kukuthi, bendiyilindele phakathi kuJuni. Ewe, njengoko unokuthelekelela, andikayifumani okwangoku, kwaye yintoni endenza ndilahle ngakumbi, akukho mntu undinika umhla oqikelelweyo, kodwa okwangoku, andiziboni naziphi na izikhalazo ezivela kuye nawuphi na umsebenzisi, nditsho neApple ebonisa ubuso bayo. Ndiyathemba ukuba olu luvo lukhuthaza umntu ukuba athathe elabo icala.
Phendula uMiguel Pascual